Shir gaar ah oo ka socda Teendhada Afisyoone | Jowhar somali news leader
Home NEWS Shir gaar ah oo ka socda Teendhada Afisyoone
Shir gaar ah oo ka socda Teendhada Afisyoone
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Madaxweynayaasha Galmudug, Hir-Shabeelle iyo Koonfur Galbeed oo tegay Teendhada lagu wado in uu dhawaan ka furmo shirka ayaa shir gaar ah u bilowday.
Goobta shirka ayaa waxaa ka maqan Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, waxaana warar soo baxaya ay sheegayaan in Deni iyo Axmed Madoobe aysan kasoo qeybgali doonin shirka oo uu dhawaan iclaamiyay Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Qoraal ka soo baxay Madaxtooyada goor dhow ayaa lagu sheegay in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa guddoomiyey kulan hordhac u ah Shirka Qaran ee dhammeystirka Arrimaha Doorashooyinka iyo fulinta heshiiskii 17-ka Sabteembar 2020 ee ay ansixiyeen Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya.
Amniga Xerada Afisiyooni ayaa aad loo adkeeyay, waxaana socda dadaalo ay wadaan Xubnaha Beesha Caalamka ee ku aadan in shirka ay tagaan Madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland.
Previous articleBelgium to hire the victims of the terrorist attacks in Brussels in 2016
Next articleMaxkamadda sare ee Niger ayaa xaqiijisay Bazoum inuu yahay madaxweynaha cusub